0 Tuesday January 19, 2021 - 11:14:03
dhaq dhaqaaqyo ciidan oo aad u xooggan ayaa lagasoo sheegayaa deegaannada dhaca xuduud beenaadka ay wadaagaan wadamada Suudaan iyo Itoobiya.
0 Monday January 18, 2021 - 15:15:28
Caabuqa Covid19 ayaa wali si xowlli ah ugusii dhax faafaya bulshada wadanka Ingiriiska ee qaarada Yurub xilli cudurkan uu halis ka geysanayo wadamada caalamka.
0 Visits: 389 |
Tobaneeyo ruux ayaa ku dhintay dagaallo laayaan ah oo dib uga qarxay deegaanno katirsan gobolka Darfur ee dhaca galbeedka wadanka Suudaan.
0 Sunday January 17, 2021 - 14:16:35
Caabuqa Covid19 ayaa saacadihii lasoo dhaafay markale gummaad ba'an ka geystay gudaha dalka Mareykanka xilli cudurkan uu faraba'an ku hayo wadamada reergalbeedka.
0 Saturday January 16, 2021 - 08:14:46
Dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in ay la baxday inta badan ciidamadii uga sugnaa wadanka Afghanistan kadib 20 sano oo ay halkaas ka dagaallamayeen.
0 Wednesday January 13, 2021 - 14:41:14
Wararka ka imaanaya Wadanka Suuriya ayaa sheegaya in duqeymo hor leh oo ay geysteen diyaaradaha dagaalka Yahuudda ay sababeen dhimashada tobanaan askar iyo maleeshiyaad iiraaniyiin ah.
0 Wednesday January 13, 2021 - 11:23:38
Caabuqa Covid19 ayaa shalay gummaadkii ugu badnaa abid ka geystay dalka Mareykanka tan iyo markii uu cudurkan wadankaas ku faafay horraantii sanaddii lasoo dhaafay.
0 Tuesday January 12, 2021 - 11:43:20
0 Tuesday January 12, 2021 - 11:32:33
0 Sunday January 10, 2021 - 12:13:35
Wadanka Mareykanka hallaagga maalinlaha ah ee caabuqa Carona Virus uu ka geysanayo ayaa sare usii kacay xilli ay buux dhaafeen isbitaalladii waaweynaa ee loo khaas yeelay in lagu daweeyo dadka caabuqa ladhiban.
0 Sunday January 10, 2021 - 12:09:39
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya shil diyaaradeed oo markale ka dhacay wadanka Indonesia ee dhacay qaaradda Asia.
0 Saturday January 09, 2021 - 08:13:30
Golaha Kongareeska Mareykanka ayaa shaaciyay in ay dacwado kusoo oogo doonaan Donald Trump madaxweynaha waqtigiisu sii dhamaanayo.
0 Thursday January 07, 2021 - 19:31:26
Iska hor'imaadyo culus ayaa dib uga qarxay xuduudda ay wadaagaan dalalka suudaan iyo Itoobiya halkaas oo bishii lasoo dhaafay uu ka dhacay dagaal lagu goobtay.
0 Thursday January 07, 2021 - 16:29:12
Carona oo dhimashadii ugu badneed maalin qura ka geystay dalka Mareykanka.
0 Wednesday January 06, 2021 - 13:24:51
Xarumo caafimaad oo kuyaal dalka Mareykanka ayaa shalay diiwaan geliyay dhimashada kumanaan kun oo ruux kuwaas oo uu gallaaftay caabuqa halista ah ee Carona Virus.
0 Tuesday January 05, 2021 - 08:37:30
Dagaallo culus ayaa dib uga qarxay qeybo badan oo katirsan wadanka Afrikada dhexe oo kamid ah dalalka dhaca bartamaha qaaradda.
Al Qaacidda oo sheegatay Mas'uuliyadda Weerar Askar Faransiis ah lagu dilay.
0 Tuesday January 05, 2021 - 08:00:57
Dhiigga soo duulayaasha jinsiyadaha kala duwan leh iyo ciidamada dabadhilifyada Afrikaanta ah ayaa wali ku qulqulaya dhulka jihaadka Saaxilka galbeedka Qaaradda Afrika halkaas oo ay wacadaro ka dhigayaan geesiyaasha islaamka.
0 Tuesday January 05, 2021 - 07:46:20
Markii ugu horraysay ayay dowladda Sacuudiga ku dhawaaqday in ay furtay dhammaan xuduudadaha ay la wadaagto dowladda Qadar kadib dhax dhaxaadin uu Mareykanku ka dhax sameeyay dhinacyadan is haya.
Askar Faransiis ah oo markale lagu dilay dalka Maali.
0 Sunday January 03, 2021 - 10:16:37
Wararka ka imaanaya wadanka Maali ayaa sheegaya in markale weerar jihaadi ah lagu dilay ciidamo katirsan soo duulayaasha Faransiiska.
Pakistan oo dhulka soo dhigtay diyaarad Basaas.
0 Sunday January 03, 2021 - 10:12:06
Dowladda Pakistan ayaa ku dhawaaqday in ay dhulka soo dhigtay diyaarad nuuca basaaska ah oo uu lahaa Melleteriga Hindiya xilli ay dul heehaabaysay deegaannada xuduudda dhaca.
0 Thursday December 31, 2020 - 16:56:59
Dowladda Hindiya ayaa qorshaynaysa in mid kamida gobollada wadankaas ay ka tirtirto islaamka iyo ehelkiisa halkaasna ay ku xoojiso Hinduuska gaalada ah.
0 Wednesday December 30, 2020 - 17:27:37
Khasaara xooggan ayaa ka dhashay qarax aad weyn oo ka dhacay garoonka diyaaradaha caalamiga magaalada Caden ee Koonfurta dalka Yemen.
0 Wednesday December 30, 2020 - 11:33:13
Caabuqa Covid19 ayaa dadkii ugu badnaa maalin qura ku dilay wadanka Mareykanka ee dhaca waqooyiga qaaradda America.
0 Tuesday December 29, 2020 - 07:37:33
Khasaara lixaad leh ayaa ciidamada soo duulayaasha Faransiiska kasoo gaaray weerar cusub oo lagula beegsaday wadanka Maali ee dhaca galbeedka qaaradda Afrika.
Xero ay deganaayeen dad Barakacayaal Suuriyaan ah oo lagu gubay dalka Lubnaan
0 Monday December 28, 2020 - 11:40:13
Xadgudubyo ka dhan ah dadka barakacayaasha Suuriyaanka ah ayaa lagasoo calaamadeeyay deegaanno dhaca waqooyiga wadanka Lubnaan ee mandiqadda Shaam.
Maleeshiyaad Shiico ah oo Koonfurta Ciraaq ku qarxiyay gaadiid ay leeyihiin ciidamada Mareykanka.
0 Monday December 28, 2020 - 08:51:16
Wararka ka imaanaya wadanka Ciraaq ayaa sheegaya in markale weerar qarax lagu qaaday kolonyo gaadiid ah oo ay lahaayeen ciidamada Mareykanka ee duullaanka kujooga wadankaasi.
Carona Virus oo dadkii ugu badnaa ku dilay dalka Mareykanka.
0 Thursday December 24, 2020 - 07:12:03
Cudurka Carona Virus ayaa shalay markale halaag daran ka geystay gobollada kala duwan ee wadanka Mareykanka.
Sedax katirsan ciidamada Booliska Faransiiska oo toogasho lagu dilay.
0 Wednesday December 23, 2020 - 11:04:02
Wararka ka imaanaya wadanka Faransiiska ayaa sheegaya in weerar ciidamo boolis ah lagu dilay uu ka dhacay bartamaha wadankaasi.
Musiibo cusub oo ku habsatay dalka Ingiriiska iyo Sacuudiga oo xayiraad ku dhawaaqay.
0 Monday December 21, 2020 - 09:52:48
Xukuumadda Aala sacuud ayaa ku dhawaaqday in ay xirtay dhammaan xuduudaheeda barigga,badda iyo hawada intaba sababa laxiriira Viruska halista ah ee caalamka kusoo kordhay.
0 Monday December 21, 2020 - 09:29:22
Wararka ka imaanaya wadanka ciraaq ayaa sheegaya in markale maleeshiyaad shiico ah ay weeraro culus ku qaaday dhismaha ugu weyn ee mareykanku uu ku leeyahay wadankaas.
Melleteriga Suudaan oo gudaha ugalay dalka Itoobiya iyo Addis oo dhaleecaysay.
0 Saturday December 19, 2020 - 06:50:54
Wararka ka imaanaya xuduudda ay wadaagaan wadamada Itoobiya iyo Suudaan ayaa sheegaya in halkaas ay ka jiraan dhaq dhaqaaqyo melleteri oo aad u xooggan.
« Prev1234567 ... 46Next »